Iprofayile yeWayini eBlush - Iindidi E Wayini
Iprofayile yeWayini eBlush
Abantu abaninzi bacinga ukuba iwayini e-blush yeyona nto bayithandayo. Ngombala obutofotofo kunye neprofayili yencasa, iwayini ezi-blush zihlala iziselo ezilula ezidityaniswa ngokulula ngokutya.
Yintoni i-Blush Wine?
Uluhlu lweewayini ezi-Blush ngokombala ukusuka kokhanya kakhulu ukuya kupinki ophakathi. Ijusi evela kwiidiliya ezisetyenziselwa ukwenza zonke iwayini zicacile ngombala-nokuba iidiliya zibomvu okanye zimhlophe. Yintoni ehambisa umbala kwiwayini yinkqubo yokushiya ijusi ecacileyo xa idibana neentsuba zewayini. Xa abenzi bewayini begqiba ekubeni benze i-blush wine, bayenza enye yezi ndlela zimbini: nokuba bayishiya ijusi ecacileyo xa benxibelelana neewayini ezibomvu zewayini kangangeyure okanye ukuhambisa umbala omncinci, okanye badibanisa umbala obomvu mhlophe kunye. Iwayini ezi-Blush zihlala zibizwa ngokuba yi-rosé.
Ngaba umntwana angaphila kwiiveki ezingama-32
Ulwazi olusisiseko lweWayini kunye neeNgcebiso ngokuSebenza
IRosé ​​xa ithelekiswa neBlush
Abantu abaninzi basebenzisa la magama mabini ngokungafaniyo, kodwa ke kukho umahluko omncinci. Nayiphi na iwayini ebizwa ngokuba yi-rosé yenziwe ngejusi eshiyekileyo inxibelelana nezikhumba kangangeyure okanye ngaphezulu. IiRosé azikaze zibe ngumxube wewayini ebomvu nemhlophe, ngelixa iwayini ebomvu inokwenziwa ngokusebenzisa nayiphi na indlela. Ke ngoko, zonke iwayini zeerossi ziyangcungcutheka, kodwa ayizizo zonke ii-blushes ezi-rose.
URosé ligama elichaza ubuchwephesha besiFrentshi bokwenza iwayini ezinombala o-pinki ongwevu ukuya kobomnyama kakhulu. Kwiminyaka yakutshanje, imeko ibikukusebenzisa igama elithi rosé endaweni ye-blush. Ngelixa iziphumo zinokuthi zifane, iwayini enelebheli njenge-blush iwayini ithanda ukuba newayini yentengiso eninzi eyenziwe kwiqashiso elikhulu ngokuchasene neebhetshi ezincinci ezenziwe ngerosé.
Iwayini ezipinki- zombini ii-rosés kunye ne-blushes-zihlala zifana newayini emhlophe enomzimba omncinci. Zihlala zilula ngokukhanya, kwaye uninzi luzijonga njengeewayini zasehlotyeni ngenxa yeencasa zazo ezihlaziyiweyo kunye nokutsha. IiRosé ezinemibala eqaqambileyo zinokusondela kufutshane nabalingani bazo ababomvu, ngesakhiwo esincinci ngakumbi kunye nobunzima. Iwayini elidala leRosé elidala kwihlabathi liphela lihlala lomile, ngelixa oogxa babo beLizwe elitsha kunokuba mnandi ngotywala obuncinci. Iwayini ezi-blush zinokukhanya, ziqaqambe, zibe neentyatyambo kunye neziqhamo. Ngelixa ezinye zinokuba bland kwaye zingabinangqondo, i-blush eyenziwe kakuhle okanye i-rosé ibhalansi yotywala, iswekile, kunye neasidi ukwenza iwayini enzima kancinci engenamandla njengeqabane layo elibomvu lewayini, kodwa linomdla wokusela nangona kunjalo.
E-United States, ezona ntlobo zixhaphakileyo zewayini e-blush oyibonayo yi-White Zinfandel, White Merlot, kunye ne-White Grenache. Ngelixa ezi zinto zinokwahluka zinokuthi 'zimhlophe' egameni, zonke zenziwe kwiidiliya ezibomvu zewayini ezishiyeke kunxibelelwano oluncinci nezikhumba ukuze zibe nombala wepinki. Ngeewayini ze-rosé, uza kubona uluhlu olubanzi lweediliya ezibomvu ezisetyenziselwa ukuzenza-ukusukela kwirosé yaseSangiovese ukuya kwi-Champagne epinki. Kuyenzeka ukuba wenze i-rosé kuyo nayiphi na iidiliya ebomvu.
I-Rosé kunye newayini ebomvu ihanjiswa kakuhle kwi-chilled-malunga nama-40 ukuya kuma-45 degrees. I-rosé eyakheke ngakumbi, eyomileyo, ekumgangatho ophezulu inokuxhamla kubushushu obushushu busebenzela ukusuka kuma-43 ukuya kuma-48 degrees. Ncedisa iwayini ebomvu kwiiglasi ezibomvu okanye ezimhlophe zewayini ezinesiqu.
Ungayinyamekela njani i-chinchilla
Nencasa yabo yokukhanya, iibhulorho zewayini eziqaqambileyo kakuhle kakhulu kukutya okuninzi. Olunye udidi olukhulu ukuzama ukubandakanya:
Ukutya kwase-Italiya kunye nesosi ebomvu
Abanye ukuba bazame
Ukuba kuphela kwewayini ene-blush okhe waba nayo yi-White Zinfandel, uya kumangaliswa yindlela entle ngayo i-blush wine okanye i-rosé.
I-Domaine Chandon Pinot Noir North Coast Reserve yeNV iwayini eqaqambileyo
I-Domaine du Gros Nore Bandol Rosé
UCharles noCharles Rosé Syrah Columbia Valley
I-Domaine de l'Hermitage Bandol I-Rosé L'Oratoire
ILachini iRose Willamette Valley
Quivira Rosé Unxweme oluseMantla
Yalumba Sangiovese South Australia Rosé Y Uthotho
Ampelos Syrah I-Santa Barbara County yaseRosé
Intliziyo Estérelle Côtes de Provence Rosé
Ukuba kukho iidiliya ebomvu, abenzi bewayini mhlawumbi bayisebenzisile ukwenza i-blush okanye i-rosé iwayini. Ngoluhlu olukhulu lweewayini eziluhlaza ezikhoyo, uqinisekile ukuba unento oyithandayo. Qala ngohlobo olwahlukileyo lwe wayini ebomvu oyithandayo kwaye ukhethe umlingane we rosé. Isenokuba yenye yeewayini ozithandayo!
Isicwangciso Board Games Umdaniso Umyalelo Petite Women's Clothing Iikhompyuter Ne Software Malunga Iimpawu
ingaba inja yam iye yahlaselwa sistroke
Ucoceka njani izihlangu ze-suede ngesoda yokubhaka
nini ukutyala amaqunube pa
idreyini ecocekileyo ngesoda yokubhaka kunye neviniga